'जस्तो मान्छेसँग बिहे गर्न मन थियो, त्यस्तै मान्छेसँग चाँडै बिहे हुनेवाला छ !'- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
'जस्तो मान्छेसँग बिहे गर्न मन थियो, त्यस्तै मान्छेसँग चाँडै बिहे हुनेवाला छ !'
काठमाडौँ — फिल्म उद्योगमा ऋचा शर्मालाई ‘सिरियस’ कलाकारका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, ऋचा यो कुरा स्विकार गर्दिनन् । ‘म अभिनय गर्छु, यो मेरो जागिर हो,’ उनले थपिन्, ‘मानिसले आफ्नो जागिर सकेसम्म उत्कृष्ट रुपमा गर्नुपर्छ । मैले हरेक प्रोजेक्टमा सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास मात्रै गरेकी हुँ ।’ ऋचाले दर्जनौं चलचित्रमा काम गरेकी छन् । त्यसमध्ये केही उत्कृष्ट फिल्ममा दरिएको छ । उनका केही फिल्म असफल पनि छन् । यद्यपी उनले काम गरेका हरेक फिल्मको अभिनयलाई दर्शकले रुचाएका छन् । उनीसँग रामजी ज्ञवालीले यो साता ‘पुरुषवार्ता’ गरेका थिए ।
मेरो नै बुबा हो । तर, अहिले उहाँ हुनुहुन्न ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हो । मलाई अनुहार हेर्न पनि मन पर्दैन ।
हाहा... । नाम भन्न सक्दिनँ । तर, धेरै वर्ष अघिको कुरा हो ।
एकजना थियो । केही वर्ष अघि तिमी मलाई भेट्न आएनौ भने यसो उसो गर्छु भन्दै धेरै धम्की दिएको थियो । अत्ति भएपछि मैले प्रहरीमा उजुरी दिएँ । प्रहरीले ठीक पारेपछि उसले कहिल्यै सम्पर्क गरेन । रमाइलो कुरा त ऊ मभन्दा धेरै कान्छो रहेछ ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ १३:२०
क्लब डेजा भूका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ
काठमाडौँ — दरबारमार्गमा रहेको क्लब डेजा भूका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् । चेक बाउन्स मुद्दामा फरार रहेका मनोज विरुद्द प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (ईन्टरपोल) मार्फत गत माघ १५ गते डिफ्युजन नोटिस जारी गराएको थियो ।
हङकङबाट नेपाल आएका श्रेष्ठलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको हो ।
कम्पनी मर्मत गर्न भन्दै विश्वराम श्रेष्ठबाट दुई करोड रुपैयाँ लिएका मनोजले उक्त रकम फिर्ता गर्ने क्रममा चेक दिएका थिए । तर खातामा रकम नभएपछि विश्वरामले उक्त चेक बाउन्स गराएर कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । गत बर्षको पुस १३ गते श्रेष्ठले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मनोज विरुद्ध बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ १२:०३